Chelsea oo dib ugu soo laabatay doonista saxiixa Romelu Lukaku & arrinta u sahleysa inay iibsadaan oo la ogaaday – Gool FM
Chelsea oo dib ugu soo laabatay doonista saxiixa Romelu Lukaku & arrinta u sahleysa inay iibsadaan oo la ogaaday
(London) 31 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dooneysa inay dib ula soo saxiixato weeraryahankeedii hore ee Romelu Lukaku suuqa xagaagan si ay ugu xoojiso safkeeda weerarka.
Xiddiga Inter Milan ayaa isaga tagay Blues 2014 isagoo xilligaas ku biiray naadiga Everton, waxaana tan iyo markaas uu sameynayay bandhig heer sare ah oo sare u kac leh marba marka ka dambeysa.
Sidaas darteed, 28-sano jirkan ayaa haatan soo jiitay xiisaha kooxdiisii hore kaddib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah ka sameeyay Serie A xilli ciyaareedkan sidoo kalena ka caawiyay Nerazzuri inay ku guuleysato Scudetto 11 sano kaddib.
Dhinaca kale, kooxda ka dhisan Galbeedka London ayaa fursad weyn u aragta saxiixa xiddigan maadaama wararka ka imaanaya dalka Taliyaaniga ay sheegayaan inay Inter iska iibineyso xiddiga reer Belgium haddii ay ku hesho lacag gaareysa 100 milyan oo gini si ay qasnaddeeda ugu soo celis lacag tiro badan oo ay dhaqaalaheeda ku kabto.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa suuqa geyneysa xiddigo dhowr ah si ay saxiixa Lukaku u hesho, waxaana xiddigaha ay dooneyso inay iibiso ka mid ah Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Olivier Giroud iyo Fikayo Tomori.
Ugu dambeyn, Macallin Thomas Tuchel ayaa doonaya inay kooxdiisa xiddigo cusub gaar ahaan qaybta weerarka, waxaana kooxda heysata horyaalnimada Yurub horraan lala xiriiriyay saxiixyada laacibka Borussia Dortmund ee Erling Haaland iyo weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane.
RASMI: Marti-gelinta Copa America oo laga wareejiyay dalka Argentina & tartanka oo qarka u saaran inuu baaqdo... (Maxay tahay sababta?)
Sergio Aguero oo gaaray magaalada Barcelona & wargeyska AS oo baahiyay xilliga uu tijaabada caafimaadka u marayo Barca